I-Kelly House eduze netheminali yamabhasi yase-U-Square** - I-Airbnb
I-Kelly House eduze netheminali yamabhasi yase-U-Square**
Nongseong-dong, Seo-gu, Gwangju, i-South Korea
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Kelly
Indawo yami yokuhlala ihamba ngezinyawo imizuzu emi-3 ukusuka e-Gwangju Bus Terminal,
Ngaphesheya komgwaqo kukhona isitolo somnyango i-Shinsegae, i-E-Mart, i-CGV, kanye ne-Terminal Restaurant.
Kunesitolo sezinto ze-CU esitezi sokuqala, i-Asian Cultural Center e-Gwangju, i-5.18 Democratization Movement Archives,
I-Yangnim-dong Penguin Village kanye ne-Kia Champions Field Baseball Stadium ziseduze.
Endabeni yezimoto ezijwayelekile, ungabhalisa futhi upake uma usitshele kusenesikhathi!
Sicela uqaphele ukuthi indawo yokupaka ayitholakali kuma-SUV noma izimoto ezinkulu.
Indawo yami itholakala eduze kwesikhumulo samabhasi sase-Usquare Gwangju. Kuthatha cishe imizuzu emi-5 kuphela ngezinyawo ukusuka esikhumulweni sebhasi ukuya endaweni yami. Ungaya esikhungweni samasiko sase-Asia, izingobo zomlando zangomhla ziyi-18 kuMeyi maphakathi nedolobha nasesigodini saseYangrim dong penguin. IKia Champions field ball park iyimizuzu engu-15 uma uhamba ngezinyawo.
Iseduze netheminali, ngakho iyindawo ekahle yokuhlola indawo ezungezile.
Kunesitolo sezinto ze-CU esitezi sokuqala kanye nezindawo zokudlela eziseduze, itiyetha yefilimu ye-CGV, iSitolo Somnyango saseShinsegae, Isitolo Sezincwadi saseYoungpoong, kanye ne-E-Mart eduze nje ekhoneni.
I-Asian Culture Center, i-Daein Night Market, i-5.18 Democratization Movement Archives, kanye ne-Gwangju Asia Champions Field edolobheni nazo ziseduze!
Indawo ekahle yokuhamba amadolobha nezifunda eziseduze njengoba indawo yami iseduze nesikhumulo samabhasi sase-Gwangju.
Kunezindawo zokudlela ezinhle, itiyetha yama-movie, isitolo somnyango saseSinsegae, isitolo sezincwadi saseYongpung, kanye nenxanxathela yezitolo enkulu ebizwa nge-E-mart lapho ungajabulela khona.
I-ACC kanye nezingobo zomlando zangoMeyi 18 kanye nemakethe yasebusuku yase-Daein, ipaki ye-Kia ball iyizitobhi ezimbalwa ezisuka kude!
4.88 · 263 okushiwo abanye
Kuseduze neGwangju Bus Terminal, ngakho-ke kuhle ukuya eDamyang, eBoseong, naseNaju eseduze. Kusukela esitobhini sebhasi esiseduze, idolobha laseGwangju kanye ne-5.18 Freedom Park kuseduze. Uma uya edolobheni laseGwangju, ungabona i-5.18 Democratization Movement Center kanye ne-Asia Culture Centre, futhi kunePenguin Village eduze, ukuze ukwazi ukuvakashela imigwaqo emidala nezindlu zetiye ezinhle nezindawo zokudlela.
Uma unemibuzo ngaphambi kuka-11pm, sicela ukhululeke ukuxhumana nami ^^
Zizwe ukhululekile ukubuza noma yimiphi imibuzo ngesikhathi sokuhlala kwakho!
Hlola ezinye izinketho ezise- Nongseong-dong, Seo-gu namaphethelo